डा सन्दुक रुइतलाई डेंगु, तीन दिनदेखि उपचार हुँदै
विराटनगर, २३ भदौ । वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई डेंगु देखिएको छ । डेंगुको संक्रमण भएपछि उनलाई हिजो अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । डा. सन्दुकसहित उनका दुई छोरीलाई समेत डेंगुको संक्रमण देखिएको छ ।
अहिले डा, सन्दुकसहित उनका दुई छोरीहरुको थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ‘उहाँहरूलाई डेंगुको संक्रमण देखिएको छ, र संक्रमण देखिएको ३ दिनदेखि उहाँहरूको उपचार चलिरहेको,’ अस्पताल स्रोतले बताएको छ । केही दिनअघि मात्रै कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’लाई समेत डेंगुको संक्रमण भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
नेपालमा तीन महिना अघिदेखि देखिएको को संक्रमणले ठूलो महामारीको रूप लिन थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार देशभरका ५६ जिल्लामा डेंगु देखिएको छ, भने करिब ४ हजार बढी मानिसहरू डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् ।
डेंगुकै कारण देशभर ६ जनाको मृत्यु भएको समेत पृष्टि भइसकेको छ । डेंगुबाट बच्नका लागि मानिसहरूले विभिन्न उपायहरू अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि धेरै मानिसहरू डेंगु सङ्क्रमणको जोखिममा रहेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
चीनबाट ल्याइएका सबै नेपालीको कोरोनाभाइरस रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’